ချစ်သူကိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းရာမှ မထင်မှတ်ပဲလူအများရဲ့ဝေဖန်ပြစ်တင်မှုခံနေရတဲ့ အမျိုးသား – Myanmar
ချစ်သူကိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းရာမှ မထင်မှတ်ပဲလူအများရဲ့ဝေဖန်ပြစ်တင်မှုခံနေရတဲ့ အမျိုးသား
January 24, 2021 admin Story, Video 0
မာရသွန်ပြိုင်ပွဲမှာပြေးနေတုန်း သင့်ချစ်သူက သင့်ကိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းမယ်ဆိုရင် ပျော်သွားမှာလား ဒါမှမဟုတ် အပြေးပြိုင်ပွဲကိုရပ်တန့်အောင်နှောင့်ယှက်ရမလားဆိုပြီးစိတ်ဆိုးမလား?
သေချာတာကတော့ အဲ့ဒီလိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းခံရတဲ့အချိန်မှာ ပျော်ရွှင်သွားမှာအမှန်ပါပဲ။အခုလတ်တလော အင်တာနက်မှာရေပန်းစားနေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ မာရသွန်ပြိုင်ပွဲမှာ ပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့ချစ်သူမိန်းကလေးကို သူမရဲ့ချစ်သူက လမ်းတစ်ဝက်မှာ လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခဲ့တဲ့အကြောင်းပါပဲ။
အပြေးပြိုင်ပွဲဝင်နေသူ ၅၀၀၀၀ ကျော်ရှိနေတဲ့မာရသွန်ပြိုင်ပွဲမှာ Kaitlyn Curran ဆိုတဲ့မိန်းကလေးကလည်း သူမရဲ့ပထမဆုံးမာရသွန်ပြိုင်ပွဲအဖြစ် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မိန်းကလေးက ပြိုင်ပွဲဝင်နေတုန်း ၁၆မိုင်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ သူမရဲ့ချစ်သူDennis Galvin ကိုလှမ်းမြင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ နှုတ်ဆက်ဖို့သွားတဲ့အချိန်မှာ သူ့ချစ်သူကောင်လေးက ဒူးထောက်ပြီးလက်ထပ်ခွင့်တောင်းလိုက်တာပါပဲ။
ဗီဒီယိုထဲမှာမြင်တွေ့ရတာကတော့ မိန်းကလေးက လူတွေအများကြီးရှေ့မှာလက်ထပ်ခွင့်တောင်းခံရလု့ိ အရမ်းအံ့သြပြီး ပျော်ရွှင်နေတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီဗီဒီယိုဟာလူမှုကွန်ယက်မှာပျံ့နှံ့သွားခဲ့ပြီး သဘောကျတဲ့လူတွေရှိခဲ့သလို ချစ်သူမိန်းကလေးပြိုင်ပွဲဝင်နေတာကိုနှောင့်ယှက်တယ်။
တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တယ်။ဘာလို့ပြိုင်ပွဲစည်းအပြင်ရောက်မှလက်ထပ်ခွင့်မတောင်းနိုင်တာလဲ။မစောင့်နိုင်တာလဲ ဆိုပြီးတစ်ချို့ကပြောနေကြပါတယ်။သင်ရော ဘယ်လိုထင်လဲ? လက်ထပ်ခွင့်ကိုတော့ မိန်းကလေးက လက်ခံခဲ့ပါတယ်။ကြည်နူးစရာဗီဒီယိုလေးကြည့်လိုက်ပါဦး
မမြင်ခင်ကတည်းက ဘေဘီလေးတွေကို ကြိုချစ်နေကြတဲ့ ဘေဘီလေးတွေ (နောက်ဆုံးပုံလေးက အသက်)
Computer မရှိလို့Blackboardပေါ်မှာ Microsoft Word ကိုအသေးစိတ်ရေးဆွဲသင်ကြားခဲ့တဲ့အံ့သြဖွယ်ဆရာ